“ျပည္သူေတြအားလံုးက ဘာလို႔လက္မခံတာလဲသိလား ? “ – ရွှေအလင်း
၁ ။ ဒီအရွယ်နဲ့ဒီအရွယ် ကလေးက ကိုကို လို့ခေါ်တာ လုံးဝမဖြစ်နိုင်လို့ ကလေးရဲ့ပြောစကားတွေနဲ့ တရားခံနဲ့ လုံး၀ ကိုက်ညီမှုမရှိ ယုတ္တိမရှိလို့
၂ ။ ဒီအရွယ်လူကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အနိုင်ကျင့်မှု ခံလိုက်ရတဲ့ကလေးဟာရုပ်ဆိုးအကျည်းတန်တဲ့ ဒါဏ်ရာတွေရှိနေရမယ် ဒါဟာ အဓိကအချက်ထဲမှာပါဝင်တယ်
၃ ။ ယာဉ်မောင်းက ကလေးကို အဓမ္မလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အနိုင်ကျင့်မှုလုပ်ပြီးဟန်မပျက်ပြန်ထွက် ကားဆက်မောင်းတယ်ဆိုတာ ယုတ္တိလုံးလုံးမရှိလို့
၄ ။ DNA တိုက်စစ်တာ မတူဘူးဆိုပြီး အရင်ရက်တုန်းက ပြန်လွှတ်ခဲ့တဲ့ CID ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်နဲ့အခု ပဲ တရားခံမိပြီဆိုပြီးရုံးတင်စစ်ဆေးမယ်ဆိုတာ အဓိပ္ပါယ်မရှိလို့
၅ ။ CCTV တွေ ဘာလို့ အပြည့်အစုံမရတာလဲဆိုတာ သေချာမရှင်းပြ ရိုးသားမှုမရှိလို့
တရားခံသည်ယာဉ်မောင်းဆိုတာ ဘယ်လို ပဲ Story တွေခင်းခင်းလက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိလို့ ဆက်ရေးမယ် ။ အခင်းဖြစ်ပွားနိုင်ချေ စဉ်းစားလို့ရတာ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတာသည် (၃) နေရာ
၁ ။ ကျောင်း
၂ ။ လမ်း
၃ ။ အိမ်
အဲ့ဒီထဲကမှ အိမ်မှာ မဖြစ်နိုင် ( ကားပေါ်ကဆင်းတာကိုအမြဲစောင့်ကြိုလို့ ) ၊ လမ်းမှာမဖြစ်နိုင် ကားပေါ်မှာ ဆရာမအပါအဝင် လူအများကြီး လမ်းမှာ ကားရပ်တယ် ဘာညာလည်းမကြားမိ ဆိုတော့ ၉၀ % ကျော်ဖြစ်နိုင်ချေအရှိဆုံးက ?
ကျောင်း သို့မဟုတ် ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်
ဒီဖြစ်စဉ်မှာ အမှန်တရားပေါ်ပေါက်ဖို့ အနီးစပ်ဆုံး အဖြေသည် – ဆရာမ N သာလျှင်ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီတော့ ဆရာမ N ဘေးပတ်ပတ်လည်က ဖိအားတွေက ဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲ ?
ဆရာမ N နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်သူတွေက ဘယ်တွေဖြစ်နိုင်မလဲ ?
ဆရာမ N ရဲ့ အကြောက်တရား ( အမှန်တရားကိုဖုံးကွယ်ဖို့ဆိုတာ အကြောက်တရားက စိုးမိုးနေမှဖြစ်နိုင်တာပါ ) က ဘာဖြစ်နိုင်မလဲ ?
တရားခံဟာ ကျိန်းသေ လူစိမ်းမဟုတ်ပါ ။ ကလေးငယ်ရဲ့ပြောစကားအရ ကလေးငယ်နဲ့သိနှင့်ပြီးသားလူထဲကပဲဖြစ်ရပါမယ် ။ ကလေးငယ်ရည်ညွှန်းတဲ့ ကိုကို ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ လူငယ်လား လူကြီးလား ?
အမှန်တရားရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ဘယ်သူရှိနေလဲ ?
၁ ။ DNA Result တွေကို မယုံပါ ။ International trusted third party တစ်ခုခုက စစ်ထားတာဆိုရင်ယုံပါမယ် ။
၂ ။ ဆရာမ N ကို မယုံပါ ။ တစ်ခုခုဖုံးကွယ်ထားတယ်ဆိုတာ ကလေးငယ်ကို ဟန့်တားခြင်း ၊ ရေဆေးပေးခြင်း ( သွေးကိုမမြင်ပဲမနေ မြင်ရင် သက်ဆိုင်ရာ မိဘကို အကြောင်းရမယ်ဆိုတာ မသိပဲမနေ ရေဆေးရင် ကလေးက နာတယ်မပြောပဲမနေ ) ဟာ သက်သေဖျောက်တာများလားလို့ယူဆပါတယ် ။
၃ ။ လက်ရှိ စစ်ဆေးမှုကိုတောင် အချိန်ဒီလောက်ကြာလာတော့သိပ်မယုံချင်တော့ပါ ။ တစ်ဖက်ကို တစ်ဖက် ထပ်ရင်းထပ်ရင်းနဲ့ အမှန်တရားဟာ လက်ဝါးတွေအောက်မှာ ပဲ ညပ်ပြီးပျောက်နေတယ်လို့ ယူဆပါတယ် ။
သမ္မတကြီးနဲ့ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများမှ နောက်ထပ် Victoria လေးပေါင်းများစွာ မပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက် ဒီအမှန်တရားကိုပေါ်အောင် လိုအပ်ရင် နိုင်ငံတကာ အကူအညီယူစေချင်ပါတယ် ။ မလိုပါဘူးမပြောနဲ့ လူသိရှင်ကြားမပေါ်ပဲ ပြည်ပုံးကားချခဲ့တဲ့ ဇတ်လမ်းတွေ တိုင်းသိပြည်သိ ။
အဂတိတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ပါ ဝင်ရောက်စစ်ဆေးစေချင်သလို အင်တိုက်အားတိုက်နဲ့ အမှန်တရားနောက်ကွယ်က ထီမထင်နဲ့မျက်နှာထားနဲ့ မင်းတို့အားလုံး ငပေါလေးတွေပါကွာလို့ ကြည့်နေမယ့် လူကို ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးပေးကြပါ လို့တောင်းဆိုပါတယ် ။
ယခု ကြေငြာချက်ထုတ်သော ယာဉ်မောင်းတရားခံကို ပြည်သူသိအောင် တရားဝင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ် ။
မသန့်ရှင်းသော လူ့အမှိုက်သရိုက်တွေကို လူ့အသိုင်းအဝိုင်းကနေဖယ်ထုတ်ပြီး အဂတိကင်းစင်သော ၊ တရားမျှတမှုရှိသော ဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုဖော်ဆောင်ဖို့ အချိန်တန်ပါပြီ ။
စမ္းေခ်ာင္း မွာ ဒီေန႔မနက္ အၾကီးအက်ယ္ မီးေလာင္သျဖင့္ အဖြားအို တစ္ဦးအပါအဝင္ လူ ငါးဦး ေသဆံုး ( ရုပ္သံ )
ရြာသားမ်ားနဲ႔ ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ စြမ္းဇာနည္ဇာတ္သဘင္နဲ႔ပတ္သက္ျပီး...